मुटु स्वस्थ राख्न अम्बा « Tuwachung.com
६. पढ्नैपर्ने ५ पुस्तक/हेर्नैपर्ने ५ फिल्म
७. आशीर्वाद फेर्न मिल्दैन ?
८. ५ तस्बिरमा गायिका इन्दिरा जोशी
९. स्थानीय कलाकारको बेजोड अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
१०. ‘बुवा बनेर कमाएर ल्याएपछि आमा बनेर पकाएर खुवाउँछु’
११. तर पनि हामी खुसी
मुटु स्वस्थ राख्न अम्बा
विनोद नेपाल	२०७७ आश्विन १९, २२:४२
‘अम्बा’ अर्थात् ‘बेलौती’ सर्वसुलभ फल हो । सहजै उपलब्ध हुने भएकाले यसलाई त्यति महत्व दिने गरिँदैन तर यो अत्यन्त गुणकारी एवम् औषधीय गुणले युक्त हुन्छ । गरिब तथा धनी सबैको पहुँचमा हुने यो फल मूलतः पेटको विकारलगायत विभिन्न शारीरिक समस्या हटाउनका लागि सर्वाधिक उपयोगी हुन्छ । अम्बाको यही गुणलाई हेरेर यसलाई ‘अमृत फल’ समेत भन्ने गरिन्छ ।
अम्बाको उत्पत्ति पेरुमा भएको मानिन्छ । आधुनिककालमा युरोपेलीको आगमनसँगै भारतमा यसको प्रवेश भएको थियो । अहिले भारतका धेरै ठाउँमा यसको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । अम्बामा भिटामिन ‘सी’को मात्रा अधिक हुन्छ तर यसमा अरू भिटामिन पनि पाइन्छन् । फस्फोरस, कार्बोहाइड्रेड, आइरन, क्याल्सियम, प्रोटिन आदि तत्व पनि अम्बामा पाइन्छन् । यसको बियाँमा फलाम तत्वको मात्रा निकै बढी हुन्छ ।
अम्बा विभिन्न किसिमका हुन्छन् । स्थानीय र उन्नत जातका धेरै बीज हुने, धेरै गुदी हुने, रातो गुदी हुने र सेतो गुदी हुने पनि अम्बा पाइन्छन् । कुनै–कुनै अम्बा त बेदाना अर्थात् बियाँ नै नहुने पनि हुन्छन् । धेरै बियाँ हुनेभन्दा धेरै गुदी हुने अम्बा राम्रो हुन्छ । अम्बा रगतको सफाइ गर्न र पेटको शुद्धताका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । यो शीतल प्रकृतिको हुन्छ । यो बातपित्त नाशक हुन्छ । यसले वीर्य उत्पादनमा सहयोग गर्छ । खानापछि अम्बा खानाले कब्जियत, अपच आदिको सिकायत हुँदैन । यसलाई बिहानै पनि खान सकिन्छ । खानाको साथमा अम्बा खाँदा पाचन क्रिया सुचारु हुन्छ ।
बच्चाहरूका लागि यो अत्यन्त पौष्टिक हुन्छ । यो मुटु, मस्तिष्क र पाचन प्रणाली सबैलाई बलियो बनाउन सहयोगी हुन्छ । पाक्दा यो गुलियो र कमलो हुन्छ भने काँचोमा साह्रो र कम गुलियो हुन्छ । यसको बीउ, पात, जरा र फल सबै औषधिका रूपमा उपयोगमा आउँछ ।
पाकेको दुईवटा अम्बा पिँधेर दूधसँग मिलाएर छान्ने, बीज भएमा फाली स्वादअनुसार गुलियो राखेर नियमित सेवन गरेमा बल, वीर्यमा पर्याप्त वृद्धि हुन्छ र शारीरिक दुर्बलता हराउँछ ।
अम्बाको पात चपाउने वा पातलाई उमालेर बनाएको काँडामा फिटकिरी मिलाएर कुल्ला गर्दा दाँतको दुखाइ ठीक हुन्छ ।
अम्बाका स–साना टुक्रा बनाएर पानीमा भिजाइ केही समयपछि पानी छानेर पिउने हो भने मधुमेह वा पिसाब रोगका कारण बारम्बार लाग्ने प्यास मेटिन्छ ।
अम्बाको हरियो पातको १०/१५ ग्राम रसमा मिश्री मिलाएर बिहान पिउने गरेमा अजीर्णका कारण हराउने भोक जाग्छ ।
खोकी लाग्दा एक दाना अम्बालाई तातो खरानीमा केहीबेर सेकी खाने गरेमा दुई/तीन दिनमा खोकी ठीक हुन्छ । अम्बाको सुकाएको बियाँ पिसेर महसँग मिलाइ साँझ–बिहान खाने हो भने पनि खोकी ठीक हुन्छ ।
यसबाहेक पनि अम्बाको धेरै औषधीय प्रयोग हुन्छ भने ताजा अम्बाको जेली, जाम, चट्नी, अचार आदि समेत बन्छ ।
एउटै गीतबाट नाम, दाम, सम्मान - October 27, 2020
आशीर्वाद फेर्न मिल्दैन ? - October 27, 2020
टीका लगाए पनि जमरा नराख्ने माझी समुदाय - October 27, 2020
बालबालिकाका मुटु जोगाउने उपयोगी किताब सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्व मुटु दिवसका अवसरमा ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ कृति सार्वजनिक गरिएको छ । कृतिमा
मार्ला है ! मोटोपनले
कोरोना कहर बीसको उन्नाइस भएको छैन । त्यसपछि अर्काे स्वास्थ्य समस्या आउला । औषधोपचार त
व्रत बस्ने कि ‘प्जिल’ ?
तौल, युरिक एसिड बढी भएर खुट्टाका बूढीऔंला सुन्निएर हिँड्नै नसक्ने मेरा एक परिचित हप्तामा दुई
ब्राजिलमा साङ्लाको पाउरोटी र केक उत्पादन
टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रम र ‘रियालिटी सो’मा कीरा खाने प्रतिस्पर्धा हेरेका हामी खानयोग्य कीरा खानु स्वास्थ्यका
एउटै गीतबाट नाम, दाम, सम्मान
‘मै ठूली भइछु रे, आइदेऊ घुम्टो ओढाइदेऊ’ शीर्षाकृत सेमिपप गीत गाएपछि गायिका रेश्मा सुनुवार चर्चामा
आशीर्वाद फेर्न मिल्दैन ?
आयुद्र्राेणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे । ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्याेधने ।। शौर्यं शान्तनवे
टीका लगाए पनि जमरा नराख्ने माझी समुदाय
बाग्लुङ । बागलुङ नगरपालिका–१ खनियाबास, सुन्दर बस्तीमा हिजोआज दसैंंंको रौनक छ । कालीगण्डकीकिनारमा रहेको बस्ती